हेमन्तले ल्याए ‘भाग्यमानी’ , हेर्नुहोस् भिडियो ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
हेमन्तले ल्याए ‘भाग्यमानी’ , हेर्नुहोस् भिडियो !
प्रकाशित: २१ पुष २०७५, शनिबार
काठमाडौं । करिब डेढ दशकदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील हेमन्त कान्छा रसाइलीले नयाँ नेपाली गीत ‘भाग्यमानी’ ल्याएका छन् । म्युजिक नेपालले निकालेको बोलको गीतमा हेमन्तलाई देवी घर्ती, झलक संगीतम, टेकेन्द्र बोहरा, शर्मिला बीसी, प्रतिमा विश्वकर्मा र अमृता नेपालीले साथ दिएका छन् ।
गीतको रचनाकार सपना रसाइली र संगीत झलक संगीतमको रहेको छ । गीतलाई धेरै दर्शक तथा स्रोताले मन पराएको हेमन्त बताउँछन् । ‘मौलिक नेपाली बाजा र लोक फेभरका भएकाले गीत राम्रो बनेको छ । दर्शक र स्रोताले पनि मन पराइरहेका छन्,’ हेमन्तले भने ।
म्युजिक भिडियो पनि तयार भएको छ । ‘भाग्यमानी’ मा श्रीप्रसाद थापा र रिना थापा मगरले अभिनय गरेका छन् । म्युजिक भिडियोको निर्देशन उमेश गुरुङले गरेका छन् ।
हेमन्तले २०६३ सालमा गाएको ‘काँचो सुन्तला’ बोलको गीत निकै हिट भएको थियो । यसबीचमा उनले करिब दुई दर्जन गीत गाए । लोकगायनका साथे अहिले उनी कुशल सारंगी वादकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनले सात हजारभन्दा बढी गीतमा सारंगी बाजा बजाइसकेका छन् ।
जगदिसको गीतमा इन्द्रदेब की ‘ठुली’ भइन् सृष्टि, हेर्नुहोस् भिडियो